Andao haneho sy hanara-penitra ny fiainana manokana | Martech Zone
Andao haneho sy hanara-penitra ny fiainana manokana
Asabotsy, Aogositra 7, 2010 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Raha mbola manjaka hatrany ny Google sy Facebook dia eo dia goavana ny fiainana manokana olana avoaka amin'ny Internet… ary marina izany.
Azontsika atao ny miady hevitra mandritra ny tontolo andro momba ny fomba tokony hanangonana, hampiasana na hivarotra ny angon-drakitrao manokana… na na tokony hahavita izy ireo na tsia…
Misy hevi-dehibe vitsivitsy inoako:
Tsy andraikitry ny orinasa ny manapa-kevitra ny amin'ny fampiasana ny mombamomba anao raha vao omenao an-jambany azy ireo izany… izany andraikitrao.
Etsy ankilany, Tsy fantatry ny mpanjifa ny fomba fampiasan'ny orinasa ny angon-drakitra - noho izany dia tezitra izy ireo rehefa hitany fa nampiasaina tamin'ny fomba tsy nampoizin'izy ireo. Pejy sy pejin'ireo safidy misafotofoto sy fanambarana momba ny tsiambaratelo izay tsy inona fa ny lozisialy misy lavaka mitovy habe amin'i Texas handehanana fa tsy izany no vahaolana.
Raha manangona ity angon-drakitra ity ny orinasa, dia andraikitr'izy ireo ny miaro azy ireo mba hahazoana antoka fa ny mpiasan'ny fahefana ihany no afaka miditra ao.
Raha tokony hiady hevitra momba ny tombontsoa na ny ara-dalàna amin'ny fiainana manokana ianao, maninona no tsy fa tsy mifantoha ny indostrian'ny tsiambaratelo hiara-hiasa amin'ireo orinasa hamokatra rafitra miray amin'ny fampitana tsara ny fomba fampiasana ny data-nao manokana. Mitovy amin'ny Creative Commons no valiny misokatra ho an'ny fitantanana ny zon'ny nomerika, tokony hanana Privacy Commons izay azon'ny mpanjifa mandevona mora azo. Ohatra vitsivitsy izao:
Na tsia ny azy ireo amidy ny angona amin'ny antoko fahatelo.
Na tsia ny azy ireo ampidirina ny data avy amin'ny antoko fahatelo.
Na tsia ny azy ireo ny angon-drakitra dia voaangona tsy mitonona anarana ary zaraina amin'ny antoko fahatelo.
Na tsia ny azy ireo ny angon-drakitra dia voaangona tsy mitonona anarana ary zaraina anatiny.
Na tsia ny azy ireo ampiasaina ho an'ny tena manokana ny angona kendrena.
Na tsia ny azy ireo ampiasaina am-panafenana anarana ny angona mikendry.
Na tsia ny azy ireo ny hetsika dia arahana manokana.
Na tsia ny azy ireo ny hetsika dia arahana tsy mitonona anarana.
Miaraka amin'ny fanarahana sy fizarana ny angona, azonay atao ny manazava ny fomba hampiasana azy:
Hivarotra hahazoana tombony.
Mba hanomezana traikefa mpanjifa tokana.
Manome tolotra manokana sy doka.
Hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ankapobeny.
Ny orinasa dia afaka mandeha lavitra amin'ny famoahana ny angona manokana amin'ny mpanjifa. Google dia nanomboka an'io tamin'ny azy ireo Account Management console, izay ahafahako mandinika ny sasany amin'ireo fampahalalana, manimba ny tantarako, na manakana azy ireo tsy hampiasa azy io.
Amin'ny maha mpivarotra sy mpanjifa ahy dia tsy tiako izany Mijanòna orinasa avy amin'ny fampiasana ny angona manokana. Mino aho fa manohy manangona vaovao momba ahy ny orinasa, afaka manompo ahy tsara kokoa izy ireo. Ohatra, heveriko fa tsy maninona ny fahafantaran'i Apple ny fitehirizam-bokiko manokana, ohatra, satria tena nanao tolo-kevitra maranitra mifototra amin'ny tantarako izy ireo.
Tags: DataData Securityny fiainana manokana
Beyond Affiliates - Fivarotana Channel Channel